Budata Malware Hunter 1.48.0.378 maka Windows
Ikpo okwu: Windows |dị: 1.48.0.378 Asụsụ: Bekee
Free Budata maka Windows (28.38 MB)
Budata Malware Hunter,
Malware Hunter bụ mmemme na-enyere aka ichebe gị pụọ na nje virus Malware Hunter bụ mmemme antivirus ị nwere ike iji ma ọ bụrụ na ịchọrọ ichedo kọmputa gị pụọ na nje na-enweghị isi na malware. i scanomi ma wepu nje na kọmputa gị. Malware Hunter na-eji ngwa njirimara nje virus Avira amata nje virus wee si otú a nwee ike ijide nsonaazụ ziri ezi.
Malware Hunter na-enye gị 3 nhọrọ nyocha dị iche iche iji nyochaa nje. Na nhọrọ nyocha ngwa ngwa, ụfọdụ folda ebe a na-etinyekarị nje na kọmputa gị.Na nhọrọ nyocha zuru ezu, faịlụ na folda niile na ngalaba nchekwa echekwara na kọmputa gị ka a na-enyocha ma nyochaa nyocha zuru ezu. Nhọrọ nchọgharị nkeonwe, naka nke ọzọ, na-enye gị ohere i scanomi folda ịdepụtara.
Malware Hunter na-enye gị ohere ịchọgharị faịlụ gị ndị akpọrọ iche ma kaa faịlụ dị mma iji nye ha ihe ùgwù. Ewezuga nyocha na iwepụ nje, Malware Hunter nwekwara atụmatụ ndị ọzọ bara uru. Ihe omume ngwanrọ kọmputa nke mmemme na-enyocha ihe ndị nwere ike ime ka kọmputa gị belata ma nyere gị aka ịme mmalite na ịrụ ọrụ nke kọmputa gị site na iwepu ihe ndị a.
Ihe nhicha ahụ chọtara faịlụ na enweghị mkpofu na sistemụ gị, na-ehichapụ ndekọ gị ma na-enye kọmputa gị ume.Na Malware Hunter, ị nwere ike ịhapụ ohere nchekwa na kọmputa gị.
Malware Hunter Ụdịdị
Nha faịlụ: 28.38 MB
Kacha ọhụrụ na: 20-04-2021
Norton AntiVirus bụ usoro ihe ngwọta na nchekwa nchekwa ọkachamara na-enye nchebe dị elu megide...
AVG AntiVirus Free dị ebe a nwere nsụgharị ọhụrụ nke na-ewe obere ohere ma belata ojiji nchekwa ma...
Kaspersky Free (Kaspersky Security Cloud Free) bụ antivirus nefu na ngwa ngwa maka ndị ọrụ Windows...
Na ComboFix, ị nwere ike ihicha nje mgbe akụrụngwa antivirus gị anaghị arụ ọrụ ComboFix bụ sọftụwia...
Malware Hunter bụ mmemme na-enyere aka ichebe gị pụọ na nje virus Malware Hunter bụ mmemme...
Emsisoft Anti-Malware bụ mmemme nke nwere ike ichebe gị nke ọma na ngwanrọ ọjọọ. Imelite nke...
AdwCleaner bụ nchekwa nchekwa dị ike ma dị elu nke na-echebe ndị ọrụ kọmputa pụọ ​​na ngwanrọ ọjọọ...
Nilebara anya na ngwa ya di mfe ma bara uru maka Windows, Carifred na aru oru yiri ya ma nyere...
360 Total Security bụ antivirus software na-enye ndị ọrụ keukwu nchedo nje ha kọmputa, yana bara...
Kaspersky Anti-Virus 2017 bụ otu nime mmemme antivirus kacha mma dị maka ndị ọrụ Windows PC taa,...
Avira Free Antivirus bụ antivirus efu siri ike maka ndị ọrụ chọrọ ichebe kọmpụta ha megide nje,...
Avast Premium Security bụ mmemme nchekwa dị elu nke na -enye nchebe kachasị maka kọmputa gị,...
ESET NOD32 Antivirus 2021 bụ mmemme antivirus dị elu nke na-echebe ndị na-agba ọsọ, ransomware na...
GridinSoft Anti-Malware bụ mmemme iwepụ nje nke ị nwere ike iji ma ọ bụrụ na ngwanrọ ọjọọ na-ebuso...
Emsisoft Internet Security Pack bụ usoro nchekwa ọtụtụ ọrụ ị nwere ike iji chebe kọmputa gị pụọ na...
Avast Ultimate bụ nchekwa na nzuzo na nchekwa arụmọrụ nke ndị ọrụ Windows PC. Ọ na-agwakọta ngwa...
Enwere ike ịkọwapụta Avira Free Security Suite dị ka ngwugwu nke na -achịkọta ngwanrọ Avira dị iche...
Ị ga-enwe ike ichebe kọmpụta gị na data gị site na nyocha ozugbo, ekele Avira Antivirus Pro, nke...
Tencent PC Manager bụ mmemme antivirus nke na-enye ndị ọrụ ngwa ọrụ nchekwa dị mfe maka nchebe...
Ngwa ihe mberede Emsisoft bụ ngwungwu nchekwa zuru oke nke ị nwere ike iburu gị noge ọ bụla. Mgbe...
Comodo Hijack Cleaner, sọftụwia ị nwere ike iji chebe onwe gị pụọ na mgbasa ozi oria ma ọ bụ...
Zemana AntiMalware na -enyocha kọmputa nime naanị nkeji isii, na -achọpụta ma wepụ malware. Mmemme...
Ad-Aware Free Antivirus bụ mmemme nchekwa na-aga nke ọma nke na-ejikọta igbochi spyware dị elu yana...
Panda Cloud Cleaner bụ mmemme antivirus dị mfe iji na-enyocha ntanetị maka ngwanrọ na nje nwere ike...
TrojanHunter bụ usoro mwepụ nke nje na-enyere gị aka wepu nje site na nyocha kọmputa gị maka...
Ihe omume IObit Malware Fighter Free bu netiti ndi ozo choro ka ndi oru choro ichedo komputa ha...
McAfee AVERT Stinger bụ mmemme nje eji ehichapụ ụfọdụ nje. Ihe mmemme a abụghị mmemme nje, kama ọ...
EMCO Malware Destroyer bụ mmemme mwepu nje na-enweghị nefu ị nwere ike iji wepu malware abanyela na...